Download ဆော့ဖ်၀ဲနဲ့ ပုဂံ Proxy - MYSTERY ZILLION
Download ဆော့ဖ်၀ဲနဲ့ ပုဂံ Proxy
Download ဆော့ဖ်၀ဲတွေ ဥပမာ. Download Accelerators, Download Manager နဲ့ FG တို့က သူတို့ရဲ့ Option --> Proxy မှာ ပုဂံ Proxy ထည့်ပေးရပါတယ်။ အရင်ကတော့ အဆင်ပြေတာပေါ့ နော်။ ဒါပေမယ့် အခု ပုဂံက Proxy တွေမလိုပဲ ထားလိုက်တော့ အဲ့ဒီဆောဖ်၀ဲလ်တွေနဲ့ ဆွဲရင် Myantel တွေပဲ ၀င်၀င်လာနေတယ်။ ဘာသုံးရင်ကောင်းမလဲ အကြံလေးပြုကြပါဦး။ မီးမြေခွေးနဲ့ Save (DL) လုပ်ရင် တော့ရပါတယ်။ တခါတခါ ကွန်နက်ရှင်ကြောင့် Retry ပြန်လုပ်ရင် အဆင်မပြေတော့ဘူး။ ၀ိုင်း၀န်း အကြံ ပြုကြပါဦးဗျာ.
Idm မှာတော့ ဘာမှမထည့်ဘဲရပါတယ် ကြိုးစားကြည့်ပါဦး။
FDM V 3.0 ဆွဲယူပြီး သုံးပါ။ Prepaid AccessKit Card နဲ့ အိမ်မှာ သုံးရင်တောင် Cafe မှာ နှေးနေ တတ်တဲ့ speed လောက်တော့ အသာလေးရပါတယ်။ resume လဲ ရတယ်။ upload လဲ ရတယ်။
ကျွန်တော်ကတော့ Ultra Surf ခေါ်ပြီးတော့ Ultra Surf proxy 127.0.0.1 : 9666 ကိုထည့်ပြီးတော့ download ဆွဲတယ်ဗျ။
ညမီးအိမ်ရေ ultrasurf အကြောင်း အသေးစိပ် ရေးထား တာလေး ရှိလား
ဘယ်လို သုံး ရ လဲ ဆိုတာလေး ပေါ့
shwelife wrote: »
shwelife ရေ ultrasurf အကြောင်းက သူ့ websites မှာရေးထားပါတယ်။
အသေးစိတ်ကတော့ဒီမှာပါ http://www.internetfreedom.org/UltraSurf ..:67: